GIMP 2.10.18 waxay la timid kooxayn qalab, hagaajin iyo ka badan | Laga soo bilaabo Linux
Saacado yar kahor bilawga nooca cusub ayaa lagu dhawaaqay oo ka socda tifaftiraha caanka ah diyo sawirada GIMP 2.10.18, nooca kaas oo ay sii socoshada sii socoshada waxqabadka iyo xasilloonida laanta 2.10 ee hadda jirta. Siidaynta GIMP 2.10.16 ayaa loo booday sababo la xiriira ogaanshaha cayayaanka marxaladda dambe ee laan-sii-deynta ee sii-deyntaan, pama waxa noocani cusub ee 2.10.18 ka kooban yahay dhammaan isbeddelada labada nooc.
GIMP 2.10.18 waxay soo jeedineysaa qaab nashqadeysan oo koox koox ah, taas oo isticmaalaha ayaa abuuri kara kooxahooda isla markaana dhaqaajin kara qalabka. Tusaale ahaan, aalado kala duwan oo loogu talagalay isbeddelka, xulashada, buuxinta, iyo sawir qaadista ayaa lagu qarin karaa gadaasha badhamada guud ee koox, iyada oo aan la soo bandhigin badhan kasta shaqsi ahaantiisa.
Asal ahaan, matalaad kooban oo ka mid ah kuwa jiidaya ayaa lagu daray, kuwaas oo guud ahaan loo isticmaalo in lagu dejiyo cabbiraadaha miirayaasha iyo qalabka.
Qaabka is haysta, - taas oo gunta sare iyo hoose la dhimayo, waxay si weyn u keydineysaa shaashadda toosan waxayna kuu ogolaaneysaa inaad dhigatid waxyaabo badan aagga muuqda. Si loo beddelo qiimaha xuduudaha, dhaqdhaqaaqa ayaa loo isticmaali karaa ka dib markaad gujiso badhanka bidix ee bidix, adoo qabanaya furaha Shift waxaa sii dheer hoos u dhac ku yimaada tallaabada isbeddelka iyo Ctrl kororka.
Sidoo kale waxaa la xusay in habka loo xiro alwaaxda iyo wadahadalada la hagaajiyay hal interface daaqad.
Markaad iskudayeyso inaad udhaqaajiso sanduuqyada wada hadalka ee gundhigga ah ee jiidaya iyo hoos udhaca, fariin faragalin ah mar dambe lama soo bandhigi doono macluumaadka ku saabsan awooda inaad uga tagto sanduuqa wadahadalka halka uu hada marayo.
Isbadal kale muhiim u ah GIMP 2.10.18 waa hab cusub oo horay loogu sii arko natiijooyinka ee isticmaalka qalabka isbeddelka, loo yaqaan "Horudhaca Isku-darka". Marka qaabkani dhaqaaqo, muujinta horudhaca inta lagu jiro isbeddelka ayaa la sameeyaa iyada oo la tixgelinayo booska lakabka isbeddelka iyo qaabka isku-dhafka saxda ah.
Qaabka cusub wuxuu kaloo bixiyaa laba ikhtiyaar oo dheeri ah: "Falanqeynta waxyaabaha ku xiran" si aad ugu fiirsato isbeddelada dhamaan waxyaabaha laxiriira sida lakabyada, kaliya maahan sheyga la xushay iyo "Falanqeyn isku mid ah" si aad ugu fiirsato sawirada intaad dhaqaajineyso jiirka / stylus. Intaa waxaa sii dheer, horudhac otomaatig ah oo qaybo go'an oo lakabyo ah oo la beddeli karo ayaa la hirgeliyaa (tusaale ahaan, inta lagu jiro wareegga).
Sidoo kale, waxaan ka heli karnaa GIMP 2.10.18 aaladda cusub ee lagu daray is-beddelka saddex-geesoodka ah, taas oo kuu oggolaanaysa inaad si aan macquul ahayn u beddesho aragtida diyaarad saddex-geesood ah oo leh wareegga lakabka ee faasasyada X, Y iyo Z.Waxaa suurtagal ah in la xaddido sawirka iyo aragtiyada la xiriirta mid ka mid ah faasaska isku-duwidda.
Isbeddelada kale ee ku xusan:
Hufnaan badan marka la dhaqaajinayo tilmaanta burushka adoo kordhinaya heerka cusbooneysiinta macluumaadka shaashadda laga bilaabo 20 illaa 120 FPS.
Ikhtiyaar lagu daray si loo joojiyo taam ahaanshaha. Joogitaanka hawo-qaboojiyaha ayaa ka kordhay 15 illaa 60 aragti ah ilbiriqsi kasta. Qalabka Transform Warp hadda wuxuu ixtiraamayaa goobaha tilmaamaha.
Qaabka sawirka isku dhejisan, ikhtiyaarka "kaleidoscope" ayaa u muuqday, kaas oo kuu oggolaanaya inaad isku darto wareegga iyo milicsiga (istaroogyada ayaa lagu muujiyaa dhinacyada geesaha qaybaha).
Gudiga la shaqeynta lakabyada waa la hagaajiyay, kaas oo isku daraya isdhexgalka si uu u midoobo lakabyada uguna biiro meelaha la xushay.
Burushka degdega ah ee qaabka burushka qaab ABR (Photoshop), oo si weyn u yareeyay waqtiga bilowga oo leh tiro badan oo burush ah qaabkan.
Taageerada feylasha ee qaabka PSD waa la hagaajiyay oo rarkooda waa la dedejiyay sababo la xiriira ka-reebitaanka heerka u-beddelka kheyraadka-culus ee mashruuca gudaha.
Qeybo ka mid ah astaamaha astaanta sare leh ayaa lagu daray, oo lagu dooran karo goobaha (asal ahaan, astaamaha kor ku xusan ayaa haray).
Ugu dambeyntii, si aad u hesho nuqulkan cusub kaliya taageero u hel xirmooyinka Flatpak.
Rakibaadda waxaa lagu sameeyaa amarka:
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » GIMP 2.10.18 waxay la timid kooxayn qalab, hagaajin iyo wax ka badan ah